Marijuana Troubleshooting | MyWeedSeeds.com
Vatangi vekutanga zvikanganiso kana vachirima mbanje
Kanganiso yakajairika inowanzoitwa nevarimi venguva yekutanga mbanje iri kudiridza-svikiro riri kukura iro rakabata mbesa nyowani. Mitemo yakajairwa ndeyekuti, paunotanga kuisira chirimwa chako chembanje, ipa fungidziro yako pamusoro pekuti inorema zvakadii kana yaoma. Nzira yakanakisa yekuita izvi ...
Cannabis tupukanana, kuumbwa uye chakuvhe
Pazasi iwe unowana rumwe ruzivo runobatsira urwo kunobatsira kuchengetedza yako mbanje gadheni kubva kune yakaipa mhedzisiro yefungi nezvipembenene. Aya anongova mashoma emhedzisiro yakaipa iyo yakawanda mbanje minda inotarisana nayo, neayo mamwe ari mavhairasi, zvirwere uye mabhakitiriya anogona kukuvadza kana kuuraya yako mbanje zvirimwa ...
Marijuana kudyara zvisina kufanira
Kupisa kunetseka pamashizha embanje kunowanzo kuratidza nekusvibisa kwemicheto yemashizha embanje. Nutrient kupisa uye kupisa kupisa zvinotaridzika zvakafanana, zvisinei, kupisa kupisa pamashizha embanje kuchangoratidza chete padhuze nemiti yemichuna iripedyo nemarambi ekupisa. Nzira chete yekugadzirisa ...
Marijuana kusagadzikana kwehutano
Matambudziko enutriyamu anokonzerwa nekuwandisa kana kushomeka kweimwe kana huwandu hwakawanda hwehukama hunowanikwa. Izvi zvinovaka muviri zvinoitwa kuti zviwanikwe pakati pH renji ye5 ne7 uye yakazara yakanyungudutswa solids [TDS] renji ye800 kusvika 3000 PPM [zvikamu pamiriyoni imwe]. Kuchengetedza aya mamiriro ndiyo kiyi ...
Marijuana inodyara matambudziko ehutano
Pazasi iwe unowana zvinokonzeresa zvezvinetso zvaunazvo nemiti yako yembanje. Rangarira kuti dambudziko rako harirekushomeka kwehumwe hutano, dambudziko rinowanzo kuve kuwanikwa kwaro. High pH inodzivirira zvirimwa kutora zvinovaka muviri zvakakosha. Kunyanyisa hunyoro kunogona ...
Gumi kukanganisa uko varimi vazhinji vembanje vanoita
Kupa mbanje miti yakawandisa mvura kuchavauraya. Iwe unongoda kudiridza kana iyo yepamusoro 2-3 "yevhu ikaoma. Kana iwe ukasarudza kukura kuburikidza nehydroponics, haungambofa wakanyanyisa kudiridza zvirimwa zvako nekuda kwekuti zvakanaka sei rockwool drains. Chero bedzi ako rockwool cubes asiri kunyudzwa mu ...